Bahasa Indonesia Cebuano Dutch English Español - Spanish Français - French Italiano - Italian Polski - Polish Português - Portuguese Tagalog Türkçe-Turkish русском - Russian हिन्दी - Hindi বাংলা লিপি Bangla lipi தமிழ் - Tamil 한국어 - Korean 日本語 - Japanese 简体中文 - Simplified Chinese
पाठ १: बाइबल अध्ययनबाट हुने फाइदाहरू
तपाईंले बाइबल अध्ययन गर्नुहुँदा, यसले तपाईंको जीवनलाई र अरूहरूका जीवनलाई असर पारेको हुन्छ । बाइबलको अध्ययनबाट तपाईंले कसरी लाभ उठाउन सक्‍नुहुन्छ सो यस पाठमा सिक्‍नुहुनेछ । बाइबल अध्ययन गरिनुपर्ने कारणहरू, बाइबल अध्ययनबाट हुने फाइदाहरू, र नियमित रूपमा बाइबल अध्ययन गर्ने महत्वको बारेमा भएका विषयहरूलाई तपाईंले अध्ययन गर्नुहुनेछ ।
पाठ २: परमेश्‍वरले हामीलाई दिनुभएको पुस्तक
परमेश्‍वरले हामीलाई बाइबल कसरी दिनुभयो भन्‍ने कुरामा के तपाईं कहिल्यै चकित हुनभएको छ ? यसलाई स्वर्गदूतहरूले एकैसाथ मिलाएर कसैले "पाओस्" भनी छोडिदिएको पो होकि ? परमेश्‍वरले सयौँ वर्षहरूका बीचमा भएका विभिन्‍न काम गर्ने साधारण मानिसहरूलाई बाइबल भनिने यो पुस्तक लेख्‍नको लागि प्रयोग गर्नुभयो । यिनीहरूले लेखेका पुस्तकहरूमा भएको मिलापले परमेश्‍वर परिवर्तन हुनुहुन्‍न भन्‍ने कुराको साक्षी दिन्छ ।
पाठ ३: तपाईंले चाहनुभएको कुरालाई कसरी बाइबलमा पाउनसक्‍नुहुन्छ
बाइबललाई पनि मिलाएर राख्‍नाले हामीलाई आवश्यक परेको कुरा हामी सजिलैसँग पाउनसक्छौँ । हाम्रा बाइबलहरू प्रकाशन गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो कुरा थाहा छ । जस्तोसुकै अनुवादमा पनि मानिसहरू अलमलमा नपरून् भनी उही अध्यायहरू र पदहरू राखिएका हुन्छन् ।
यस पाठमा हामीले बाइबलका पदहरूलाई कसरी भन्‍नु र लेख्‍नु पर्ने हो र हामीले भेट्टाउनुपर्ने विषय र पदहरूलाई सहायता पुर्‍याउने आधारभूत अध्ययनलाई कसरी प्रयोग गर्ने यस बारेमा सिक्‍नेछौँ ।
पाठ ४: पुरानो करारका पुस्तकहरू
इतिहासका पुस्तकहरूले तिनीहरूका वीरहरूका बारेमा हामीलाई बताउँछन्, तर पुरानो करारले तिनीहरूको दिनका साधारण व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गरेको छ । यी कथाहरू कम महत्वपूर्ण छैनन् किनकि तिनीहरूले हामीलाई परमेश्‍वरले आफ्ना मानिसहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसको स्पष्‍ट चित्रण गर्छन् । पुरानो करारका पुस्तकहरूलाई पाँच मुख्य विषयहरूमा बाँड्न सकिन्छ । पाठ ३ मा हामीले अध्याय र पदजस्ता पुस्तकका साना साना विभाजनलाई हेर्‍यौँ । अब हामी मुख्य विभाजन वा वर्गीकरणलाई हेर्नेछौँ ।
पाठ ५: नयाँ करारका पुस्तकहरू
नयाँ करार लेखिएको समयमा पुरानो करारको रूप धेरै परिवर्तन भइसकेको थियो । भविष्यवक्ताका दिनहरू सकिएका हुनाले धेरै मानिसहरूलाई आत्मिक कुराहरूमा वास्तै थिएन । यस समयमा परमेश्‍वरले आफ्ना पुत्रलाई अकस्मात यस संसारमा पठाउनुभएको होइन । ग्रीकहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्‍नको निम्ति साधारण भाषाको विकास गरिदिएका थिए भने रोमीहरूले सुसमाचारको कामको लागि न्यायचित सुरक्षा र स्वतन्त्रता प्रदान गरेका थिए ।
पाठ ६: बाइबल परमेश्‍वरको वचन हो भनी हामीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ
"बाइबल सत्य हो भनी तपाईंलाई कसरी थाहा छ ?" भन्‍ने प्रश्‍न प्रायजसो सबै ख्रीष्‍टियानहरूले कुनै न कुनै बेला सामना गर्नैपर्छ ।
यो प्रश्‍न नयाँ होइन । मानिसको पहिलो परीक्षा परमेश्‍वरको वचनमा हमला गरिएर शुरू गरिएको थियो । सर्पको भेषमा आएको शैतानले हव्वालाई भन्यो, "के परमेश्‍वरले तिमीलाई यसै भन्‍नुभयो त...?" (उत्पत्ति ३:१ पढनुहोस् ।) "के परमेश्‍वरले तिमीलाई यसै भन्‍नुभयो त...?" भनी शैतानले अहिले पनि मानिसहरूका ह्रदयमा शंका हालिदिन्छ ।